Shiinaha Qiimaha jaban ee Shiinaha Warshada Spinner-ka Jumladda Fidget Spinner-ka La Isticmaalay Kubadda dhoobada Isku-dhafka ah ee 688 soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Xinri
Duubabka duuban ee duuban
Wareegtada Wareegta ah ee Silindrical
Xirmooyinka Roller-ka ee wareegsan
Cirbadaha Roller Biarings
Kubbada Xidhiidhka Xaglaha ah
Isku toosinta Kubadaha
Kubbada Qaadista Barkimada
Xargaha Hubka ee Wheel
Qaadashada Tooska ah
Kubbada Qaadista Deep Groove Yar
Qiimaha Jumlada ee Warshada Shiinaha ee Tayada Wanaagsan Com...
Warshada OEM ee Shiinaha 6203 Heerkulka Sare ee Hadalka Sare ...
Shiinaha Qiimaha jaban ee China Miniature Ball Bearings 608,...
Irbada rullaluistemadka soo saaraha
Guryaha rullaluistemadka cylindrical
Waxqabadka Sare ee Gawaarida Hubka ee Gawaarida
Barkin guri oo sita oo sita ucp 200 taxane ah
Kubbada xadhkaha riixitaanka ee tayada sare leh
NTN/NSK/KOYO Deep groove kubbad sidday 6300 taxane,64...
Iibiyaha rullaluistuyada is-ku toosan
30200 taxane ah oo tayo sare leh oo tayo sare leh
Soosaaraha OEM/ODM Kubbada Xidhiidhka Xaglaha Fo...
Ilaha warshadda Nsk Deep Groove Ball Bearing - Deep ...
Qiimaha jaban ee China Spinner Hand Spinner Warshada Jumlada Fidget Spinner La Isticmaalay Kubadda dhoobada Isku-dhafka ah 688
● Irbadu rullaluistu waxay leedahay awood qaadsi weyn
● Isku-dhafan hoose oo jilicsan, waxtarka gudbinta oo sarreeya
Waxaan u qaadanaa "macmiilka-saaxiibtinimo, tayada-oriented, isdhexgalka, hal-abuur leh" ujeeddooyin ahaan. "Runta iyo daacadnimada" waa maamulkeena ku habboon qiimaha jaban ee China Hand Spinner Wershadda JumladdaFidgetSpinner Isticmaalay Hybrid Ceramic Ball Bearing 688, Si loo bixiyo rajada qalab iyo xalal aad u wanaagsan, iyo si joogto ah loo horumariyo mishiinka cusub waa ujeedooyinka ganacsi ee shirkadeena. Waxaan horay u eegaynaa iskaashigaaga.
Waxaan u qaadanaa "macmiilka-saaxiibtinimo, tayada-oriented, isdhexgalka, hal-abuur leh" ujeeddooyin ahaan. "Run iyo daacadnimo" waa maamulkeena ku habboonShiinaha Fidget Spinner, Fidget, Kadib 13 sano oo cilmi baaris ah iyo horumarinta alaabada iyo xalalka, calaamadeenu waxay matali kartaa badeecooyin kala duwan oo tayo sare leh oo suuqa adduunka ah. Hadda waxaanu dhamaystirnay qandaraasyo waaweyn oo ka yimid dalal badan sida Germany, Israel, Ukraine, United Kingdom, Italy, Argentina, France, Brazil, iyo wixii la mid ah. Waxaa laga yaabaa inaad dareento ammaan oo aad ku qanacdo markaad naxaasta nala sameyso.
Saamiyada isku -dhafan waxay leeyihiin faraantiyo ka samaysan bir -sita iyo walxaha duudduuban ee ka samaysan nitride silikon (Si3N4), taas oo ka dhigaysa baallaha korantada.
Silicon nitride curiyayaasha waxay kordhin karaan nolosha adeegga iyagoo bixinaya wax -qabad dhalid oo la xoojiyay, xitaa marka lagu jiro xaalado hawlgal oo adag.
Codsiga ugu tooska ah ee nitride silikon ee ku jira saa'idka waa in la sameeyo saamiyo isku -dhafan. Kubbadda ama rullaluhu waa maaddada nitride silikon, iyo sita giraanta gudaha iyo dibaddaba ee birta ka samaysan waxaa la dhahaa isku -dhafka isku -dhafan. Sida kubbadda ama duubista kale ee dhalidda isku -darka, suuqa dalabka ee nitride silicon ayaa sii kordhaya. Jadwalka soo socda wuxuu taxayaa faa'iidooyinka iyo codsiyada gaarka ah ee dhoobada nitride dhoobada sida alaab sidata. Marka nitride silikoon la xidho, waxay muujinaysaa sifooyin la mid ah biraha xambaarsan, taas oo ah, waxay u foorarsataa si ay u samaysato dhibco godad, halkii ay gabi ahaanba jabi lahayd, iyo iska -caabbinta khilaafku wuu kordhaa buuquna wuu kordhaa, laakiin dhalintu weli way socon kartaa. ama xitaa qalliin qallalan, haddii ay dhacdo in si lama filaan ah wax ugu dhinto maaddada, waxay sidoo kale ku shaqayn kartaa oo si fiican ugu shaqayn kartaa xaalad degdeg ah.
● Ka ilaalinta dhaawaca korontada ee hadda jira
Raadinta isku-dhafan ayaa ah kuwa aan tabinayn sidaa darteedna waxay ku habboon yihiin codsiyada sida AC iyo DC matoorrada iyo matoorrada, halkaasoo durdurrada korontadu ka jiraan.
Cap Awoodda xawaaraha sare
Cufnaanta curiyaha silikoon nitride waa 60% ka hooseeyaa isku-rogid isku cabbir ah oo ka samaysan bir-sita. Miisaanka hoose iyo hoos -u -dhaca ayaa u tarjumaya awoodda xawaaraha sare iyo dabeecadda ka sarreysa inta lagu gudajiro bilowga iyo joogsiga degdegga ah.
● Adeegga nolosha dheer
Kuleylka hoose ee isku -dhafka ah ee ka dhasha isugeynta isku -darka, gaar ahaan xawaaraha sare, wuxuu gacan ka geystaa cimri dhererka adeegga dhalidda iyo waqtiyada dib -u -soo -kabashada oo la dheereeyey.
Resistance Adkaysi-u-adkaysi badan
Silicon nitride curiyaha walxaha waxay leeyihiin heer sare oo adaygnimo ka dhigaysa saa'idka isku -dhafan oo ku habboon xaalado adag iyo deegaanno faddaraysan.
St Adkeynta dhalidda sare
Iyada oo leh qaab -dhismeed sare oo dabacsanaan leh, saa'idka isku -dhafan ayaa bixiya adkaysiga dhalmada oo kordhay.
Risk Khatarta dhimista oo la yareeyo
Xataa marka ay jiraan xaalado saliidayn oo aan ku filnayn, sida xawaaraha sare iyo dardargelinta degdegga ah, ama meesha uu ka jiro filim hydrodynamic oo aan ku filnayn, halista is -xoqidda ayaa la yareeyaa inta u dhexaysa nitride silikoon iyo sagxadaha birta.
Hoos u dhac ku yimaadda kaadinta beenta ah
Marka la gilgilayo gariir, wax -qabadka isku -dhafan ayaa si aad ah ugu yar u nuglaanta beenta been abuurka ah (sameynta niyad -jabka hoose ee jidadka tartanka) ee u dhexeeya nitride silikoon iyo sagxadaha birta.
Dareenka oo yaraada jaangooyooyinka heerkulka
Walxaha Silicon nitride ee duuban waxay leeyihiin isku -dheelitir hoose oo ballaarinta kuleylka ah, taas oo macnaheedu yahay inay ka xasilloon yihiin heerkulka heerkulka dhexdiisa oo ay siiyaan kontorool preload/nadiifin oo sax ah.
In warshadaha farsamada, dhoobada nitride silicon waxaa loo isticmaali karaa sida garbaha marawaxadaha, siddo shaabad farsamo, saa'idka heerkulka sare, qalabka goynta xawaaraha sare, wasakhaha joogtada ah, iwm. . Si kastaba ha noqotee, alaabada dhoobada silikoon nitride waxay leeyihiin iska caabin aad u fiican, iska caabinta daxalka iyo heerkulka sare ee iska caabbinta shoogga kuleylka, kaas oo loo adeegsan karo goobta warshadaha mashiinnada halkii laga isticmaali lahaa alaabada birta
cabbirada ugu muhiimsan firfircoon guurto ah Xadka culeyska fatique Qiimaynta xawaaraha Magacaabid
17 40 12 9.56 4.75 0.146 45000 20000 6203-2RSLTN9/HC5C3WT
17 40 12 9.56 4.75 0.146 45000 28000 6203/HC5C3
Qiimo jaban Shiinaha Fidget Spinner, Fidget, Ka dib 13 sano oo cilmi baaris ah iyo horumarinta alaabada iyo xalalka, calaamadeenu waxay matali kartaa badeecooyin ballaaran oo tayo sare leh oo suuqa adduunka ah. Hadda waxaanu dhamaystirnay qandaraasyo waaweyn oo ka yimid dalal badan sida Germany, Israel, Ukraine, United Kingdom, Italy, Argentina, France, Brazil, iyo wixii la mid ah. Waxaa laga yaabaa inaad dareento ammaan oo aad ku qanacdo markaad naxaasta nala sameyso.
Hore: Xigashooyinka Baaskiilka Shiinaha ee PTFE Cage Hybrid Ceramic Si3n4 Ball Bearing F691
Xiga: Shiinaha Qiimaha jaban ee Shiinaha Kubbada Yaryar 608, 605, 624, 683, 695, 627, 629
Shiinaha Fidget Spinner
Mid ka mid ah kuwa ugu kulul ee Shiinaha Inj-ga Cabirka Taper Roller...
NAGA WARARKI UGU DANBEEYEY
Linqing Xinri Precision Bearing Company
Cinwaanka: Beerta warshadaha ee Yan Dian Town, Magaalada Linqing, Gobolka Shandong, Shiinaha
Taleefanka: + 86-635-2857766
Fakis: + 86-635-2857768